2077 फाल्गुन 14, शुक्रबार
निराशा बनाउने "एउटा यस्तो प्रेम कहानी"
cinepati | प्रकाशित: २०७७, माघ ५, सोमबार
कोरोना महामारीको कारणले बिश्वनै जनजीवन प्रभावित पारिरहँदा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । यस महामारीले हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनायो । जसमा सिनेमा क्षेत्र अछुतो भएन । कोरोनाको कारण भएको लकडाउन केही खुकुलो भए पनि सरकारले सिनेमा हल खोल्नलाई अनुुमती दिन समय लगाएको थियो । यता सरकारले अनुमति दिए पनि शुुन्य हलमा कोही निर्माताले आफ्नो चलचित्र रिलिज गर्न तयार भएनन् । लामो समयको हल बन्द त्यसमा पनि महामारीले जनजीवनमा पर्न गएको असरको कारण निर्माताले जोखिम उठाउन चाहेनन् । तर सबैको आशा बनेर अभिनेता शिव श्रेष्ठले आफ्नो चलचित्र "एउटा यस्तो प्रेम कहानी" प्रदर्शनमा ल्याए । झन्डै ८ महिनाको लकडाउन पछि नयाँ चलचित्र रिलिज हुने भएसँगै चलचित्रकर्मी, हल सञ्चालक र नेपाली चलचित्र प्रेमीमा नयाँ उत्साह र आशा थपिएको थियो । तर आशा नपलाउँदै एउटा यस्तो प्रेम कहानीले सबैलाई निराश बनाइदिएको छ ।
लामो समयपछि हल खुलेको , अझ त्यसमा पनि नयाँ चलचित्र , दर्शकको बाढी लाग्ने आशालाई निराश बनाउँदै ठ्याकै उल्टो भयो l नेपाली चलचित्रले आएको दर्शकलाईनै बिच्काइदियो । चलचित्र चर्चामा नआएको भने हैन । चर्चामा रहँदा रहँदै पनि दर्शक चलचित्र हेरेर बिच्किनुको कारण के ? उत्तर आउँछ चलचित्रको कथावस्तु l ’एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ पनि त्यसैको सिकार बन्यो चलचित्रको कथा सुरु हुन्छ, प्रमुख पात्र प्रेम (शक्ति) र प्राप्ति (कविता) बाट । हराएको एउटा सामाग्रीमार्फत प्रेम र प्राप्ति नजिकिन्छन् । दुई बिच प्रेम मौलाउँछ । त्यसपछि प्रेमले एक व्यक्तिमार्फत आफ्नो विगत खोतल्छ । मल्टिस्टाररको भीड रहेको यो चलचित्रमा पात्रहरूको स्थापना निकै कमजोर छ । सोनाम (वर्षा), कान्छी (प्रियंका) र वरुण (नरेन खड्का)को प्लटसँगै फ्ल्यासब्याकमा विगत सुरु हुन्छ । यी तीन पात्रको जीवनको उतार चढावमै अलमलिन्छ चलचित्र ।
शक्तिले आफ्नो विगत थाहा पाउला त ? यसको उत्तर ’टुवि कन्टिन्युड’मा जबरजस्ती टुङ्ग्याइएको छ ।लकडाउन पछि यो चलचित्रले हलको बाटो देखाउला भनेर प्रदर्शनमा लेराइएको उक्त चलचित्रले दर्शकलाई बाटो नै बिर्साइदिएको छ l यस्ता चलचित्रलाई दर्शक सामु लेराउनु भनेको सुपरस्टार शिव श्रेष्ठको लागी लज्जास्पदनै हो l नयाँ चलचित्रले दर्शकलाई हल सम्म तान्ने चलचित्रर्मीहरुको विश्वास थियो तर हिन्दी सिनेमा ‘मास्टर’ले हलसम्म राम्रो सङ्ख्यामा दर्शक फर्काए पनि ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ले भने दर्शक बिच्काएको गुनासो वितरकले नै गरेका छन् l अहिलेको अवस्थामा नेपाली चलचित्र रिलिज गर्न निर्माता तयार छैनन् । त्यसैले दर्शकलाई हलसम्म ल्याउन र नेपाली चलचित्र रिलिज गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि विदेशी चलचित्रमा लगानी गरेर रिलिज गर्नु परेको हो ।’
'अब आउन्या भया' मा आसिफ र रेश्माको माया (भिडियो)
कमेडी ‘च्याम्पियन सिजन २’को औपचारिक घोषणा
‘गंगूबाई काठियावाडी’ मा फरक अन्दाजमा आलिया (भिडियो)